Home Wararka Mucaaradka oo Dowladda Soomaliya ku ee deeyay Qaraxyadii ka dhacay Magaalada Muqdisho
Mucaaradka oo Dowladda Soomaliya ku ee deeyay Qaraxyadii ka dhacay Magaalada Muqdisho
Xildhibaan ka Tirsanaa Baarlamaankii 9-aad ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa eedeen u jeediyay Madaxda Dowladda Soomaaliya.
Ex Xildhibaan Cabdi Barre Jibriil oo haatan kamid ah Siyaasiyiinta dhaliishan Dowladda Soomaliya oo la hadlay mid ka mid ah Warbaahinta Muqdisho ayaa sheegay in Madaxda Dowladda Soomaaliya ay ku fashileen waxyaabo badan oo laga sugayay.
Waxa uu sheegay In 18-kii bilood aynu soo dhaafnay ay ku mashquuleen Madaxda faan iyo weeraro lagu qaado Siyaasiyiinta kasoo horjeeda,taasina ay keentay in maalin cad weerar lagu qaado Xarumaha muhiimka ah ee Dowladda.
Sidoo kale waxa uu usoo jeediyay Madaxda Hay’adaha Amaanka Dowladda Soomaaliya in ay icsilaan, madaama ay ku fashilmeen xaqiinta amniga Magaaladda Muqdisho.
Hadalka Ex Xildhibaan Cabdi Barre ayaa kusoo beegmaya xili shalay Ciidamo ka tirsan Shabaab ay weerar ku qaadeen meel ku dhow xarunta Madaxtooyadda Soomaaliya.
Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaas iyo qaraxyadda ku dhintay 6-ruux oo 3-kamid ah ay aheeyeen ragii weerarka soo qaaday sida ay sheegeen Hay’adaha amaanka Dowladda Soomaaliya.
Previous articleMaxay tahay danta Shacbiga Soomaaliyeed ugu jirta Shirka Brussels
Next articleFaahfaahino kasoo baxay Guddoomiye degmo oo u ku dhaawacmay Qarax Miino..
Ganacsade Soomaaliyeed oo Xalay lagu dilay Dalka Koonfur Afrika
War Deg Deg ah:-Duqeeyn ka socoto Magaalada Muqdisho iyo weerar madaafiic...